The-eyi ọha egwu bombings na 2019
336 bombings na 2019 na Sweden. Olee otú ọtụtụ n'ime ha e rụrụ site-eyi ọha egwu?
måndag 30 december 2019 14:46 📧
arụrụ n'ụlọ bombs
Good egosi na e nwere ndidi 236 ntiwapụ ma tinyere November 30, 2019. Na 2018 ọ bụ 162 bombings ofụri isua.
Na mbụ, aka grenade, ugbu a na-eji kama arụrụ n'ụlọ bombs ihe dị ka ngwá agha.
Na Linköping, June 7, 2019 ghasara nnukwu bọmbụ nke afọ.
The mgbawa ụgwọ n'etiti 15-20 n'arọ. The mgbawa bụ nnọọ ike nke na ọtụtụ ụlọ ndị e bibiri nke ukwuu.
A iri na abuo ndị mmadụ merụrụ ahụ. Ọ bụ ọrụ ebube na ọ dịghị onye e gburu.
316 ịgba égbè na 38 nwụrụ anwụ
Ruo mgbe 15 December nke afọ a, na e nwere 316 ịgba égbè na 38 ndị e gburu. 2018 bụ 306 otiti na 45 e gburu.
Nanị ụzọ imeri ihe a bụ na ndị mmadụ ga-esi na-anụ banyere Jizọs mere na ha nwere ike inweta Ya-azọpụta.
Anyị kwesịrị ikpe ekpere na Jizọs na-ezipụ ndị ọrụ n'owuwe ihe ubi ya.
Mgbe ndị mmadụ na-enweta Jizọs na-gbapụtara na gbanwee.
Ya mere ebe tupu na-aga nri ụjọ ga-udo.
Vecka 19, måndag 10 maj 2021 kl. 21:35